विदेश जान चाहनुहुन्छ? आकर्षक रोजगारीको अवसर, तलब २ लाख ८२ हजारसम्म, साथै यस्ता सुविधाहरु सहित… – Khabar PatrikaNp
Prevजतिसुकै बिजी भए पनी २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला ! तपाईंको सोंच मा परिवर्तन आउनेछ
Nextसशस्त्र प्रहरीमा एआईजीदेखि डिएसपीसम्मका दर्जनौं अधिकृतहरू अवकास
नेपालमा भर्खरै ४.७ रेक्टर स्केलको भुकम्प !
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25158)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (20616)